တစ်နေ့လျင်ခြောက်နာရီအောက် လျော့နည်းအိပ်စက်သူများ အသက်တိုနိုင် - ♥ မြန်မာချစ်သူမိသားစု ♥
တစ်နေ့လျင်ခြောက်နာရီအောက် လျော့နည်းအိပ်စက်သူများ အသက်တိုနိုင်
Posted by ရဲဂျာ on October 8, 2010 at 1:57am in အလှအပ နဲ့ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ
အိပ်ရေးဝအောင် အိပ်စက်မှုမရှိသော အလေ့အထ ကြာရှည်စွာ စွဲကပ်နေခြင်းသည် အသက်တိုစေတတ်ကြောင်း ပညာရှင်များက သတိပေးပြောကြားခဲ့သည်။ တစ်နေ့လျင် (၆)နာရီအောက် လျော့နည်းကာ အိပ်စက်ချိန်ရှိသူများသည် သာမန်ထက် ပိုမိုစောစီးစွာ သေဆုံးနိုင်ကြောင်း အီတလီနှင့် ဗြိတိန်မှ သုတေသီများကဆိုသည်။ ၎င်းတို့၏ လေ့လာမှုအရ တစ်နေ့(၆)နာရီအောက်သာ
အိပ်စက်သူများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် (၈)နာရီကြာ အိပ်စက်သူများထက် ပျမ်းမျှ(၂၅)နှစ်ထိ အသက်ပိုတိုရန် (၁၂)ရာခိုင်နှုန်း ပိုမိုနီးစပ်ကြောင်း သိရသည်။ Sleepဆေးပညာဂျာနယ်က ယခုတွေ့ရှိချက်အား လူပေါင်း(၁.၅)သန်းအား မတူညီသည့် သုတေသနပြုမှု (၁၆)ခုဖြင့် လေ့လာခဲ့ပြီး ကောက်ချက်ဆွဲထားခြင်းဟု ရေးသားဖော်ပြခဲ့သည်။ (၆)နာရီနှင့် (၈)နာရီကြား ကာလသည် လူတစ်ဦး နေ့စဉ်ပုံမှန် အိပ်စက်သင့်သည့် အခြေအနေဖြစ်ပြီး ထို့ထက်ပိုခြင်း၊ လျော့ခြင်းတို့သည် စောစီးစွာ သေဆုံးခြင်းနှင့် ဆက်စပ်နေကြောင်း ဆရာဝန်များကဆိုသည်။ လောင်းဘာရိုး အိပ်စက်မှု သုတေသနစင်တာမှ ပါမောက္ခ ဂျင်မ်ဟုမ်းက “အိပ်စက်ခြင်းဟာ ဓာတ်ခွဲခန်းသုံး လစ်တမတ်စ် စက္ကူလိုပါပဲ။ စိတ်ပိုင်းရော၊ ရုပ်ပိုင်းရောရဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ဆက်နွယ်နေပါတယ်။ အိပ်တာကို အလွန်အကျွံဖြစ်ရင်၊ လိုတာထက်လျော့နေရင် တခြားရောဂါတွေ အများကြီး ရလာနိုင်ပါတယ်”ဟု ရှင်းပြခဲ့သည်။ “တချို့တွေက တစ်နေ့ကို (၅)နာရီလောက်ပဲ အိပ်ကြပါတယ်။ ဒါဟာ ကျန်းမာရေး ရှုထောင့်ကကြည့်ရင် အန္တရာယ်များပါတယ်။ အိပ်ချိန်မလုံလောက်တာဟာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဇီဝဖြစ်စဉ်တွေအတွက် မောင်းနှင်နိုင်စွမ်းနဲ့ ပုံမှန်လည်ပတ်နိုင်စွမ်းကို ကြီးကြီးမားမား ထိခိုက်လာနိုင်ပါတယ်”ဟု ဒေါက်တာဟုမ်းက ပြောကြားသွားသည်။
Credit By Planet.com.mm Tags: တစ်နေ့လျင်ခြောက်နာရီအောက်, အသက်တိုနိုင်, လျော့နည်းအိပ်စက်သူများ မျှဝေမယ် Twitter
Permalink Reply by leileikaykhine on October 8, 2010 at 11:46am တခါမှတော့၆နာရီအောက်လျော့မအိပ်ဖူးဘူး....ဟဲဟဲ.....thanks !
Permalink Reply by shweyeeaung on October 8, 2010 at 12:13pm ငါကတော့ ကွက်တိပဲ 8နာရီအိပ်တာ
Permalink Reply by aungkhin on October 8, 2010 at 2:15pm really thank you.
Permalink Reply by thet naing win on October 8, 2010 at 5:33pm ကျနော်ကတော့ တနေ့ကို(8) (7)နာရီလောက်အိပ်တယ်
အခုလို ကျန်းမာရေးတွေ ဖတ်ရလို့ အများကြီးကျေးဇူးနော်
Permalink Reply by Aung Kyaw Naing on October 8, 2010 at 6:11pm အိပ်လို့ မရဘူး....ငါ့မျက်လုံးတွေ မပိတ်သေးဘူး..!
Permalink Reply by ayeayetoe on October 8, 2010 at 8:40pm Yes.No need to worry about my health.My eyes always closed 10pm and wake up 7am ..just nice ha2
Permalink Reply by Hnin Nwe Aye on October 8, 2010 at 10:01pm ဒါဆို ပြင်မှရတော့မှာပေါ့ ... 8 P.
Permalink Reply by jack on October 9, 2010 at 12:15am ကျေးဇူးပါ.....ဆက်လက်တင်ပြပေးပါအုံးဗျာ....
Permalink Reply by paulamsuan on October 9, 2010 at 12:44pm Thank you so much for sending this article
Permalink Reply by J@y J@y on October 9, 2010 at 1:17pm ကျေးဇူးပါပဲဗျာ..အခုလို သတိပေးတဲ့အတွက်..ကျွန်တော်က အိပ်ရင်အမြဲတမ်း ညဘက်3နာရီ 3နာရီခွဲမှ အိပ်ဖြစ်တယ်ဗျ
အခွေကြည့်တယ် စာရေးတယ်..အခုတော့ ကျွန်တော် ဆင်ခြင်ရတော့မယ်..။
မိန်းမ ရသေးဘူးဗျ...။ဟဲ ဟဲ
Permalink Reply by mgkyaw on October 9, 2010 at 5:25pm အသက်တို ဖို့များနေပြီထင်တယ်။ တနေ့ကို4နာရီလောက်ဘဲအိပ်ဖြစ်တယ်။ တခါတလေကျတော့လဲ 12 နာရီ 13 နရီလောက် အိပ်ဖြစ်တယ်။ ငါကောင်းနေပြီ။
Permalink Reply by lover on October 9, 2010 at 9:25pm ကျွန်တော်ကတော့၈နာရီအိပ်တယ်ဗျာ